Famous Travellers Express | Home
Passenger Type Foreigner Local
Yangon (ရန်ကုန်) Myin Chan (မြင်းခြံ) Taunggyi (တောင်ကြီး) Pyay (ပြည်မြို့) Shwe Bo (ရွေဘို ) Bagan(PKK) (ပုဂံ(ပခုက္ကူ )) Hopong (ဟိုပုံးမြို့ ) Mandalay (မန္တလေး) Nyaung Shwe (ညောင်ရွှေ) Thit Taw (သစ်တော) Monywa (မုံရွာ) Nay Pyi Daw (နေပြည်တော်) Pyin Oo Lwin (ပြင်ဦးလွင်)
Group Male Female Monk
Download your E-ticket or Track ticket status by clicking TRACK TICKET Button above.
Search the Trip: မိမိ သွားလိုတဲ့ ခရီး From, To, ခရီးသွားလိုသည့် နေ့ရက်၊ ခရီးသွားမည့် လူဦးရေကို ဖြည့်စွက်ပြီး “Yes, Book Now” ကို နှိပ်ပါ။
Search the Seat: (Available) ရရှိနိုင်သောခုံများထဲမှ မိမိနှစ်သက်ရာ ခုံကို ရွေးချယ်၍ Continue Booking ကိုနှိပ်ပါ။
Fill the passenger detail : Guest (သို့) Register Member အနေဖြင့် Check Out လုပ်ပါ။
Make Payment: ကား လက်မှတ် ငွေ ပေးချေမှုအား MPU (သို့) Visa/Master (သို့) Deposite စသဖြင့် မိမိ နှစ်သက်ရာ Payment System ကို ရွေးချယ်ပါ။
Famous Traveller Card
Get Famous Traveller card
for discount travel all year.
The majority of our buses are Scania,
fitted with luxury seats, power sockets
View and print our daily...
Track our bus in real time
Get FREE discount voucher here
Get Travel Tips and Ticketing su...
Hire our bus for your group trip...